सानिमा माई हाइड्रोपावरको हकप्रद खुला, आवेदन भर्न कहाँ जाने ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सानिमा माई हाइड्रोपावरको हकप्रद खुला, आवेदन भर्न कहाँ जाने ?
काठमाडौं - सानिमा माई हाइड्रोपावरको १००% हकप्रद सेयर शुक्रबारदेखि बिक्री खुला भएको छ। सानिमाले १ः१ अनुपातमा प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरको १ करोड ५ लाख ५० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गरेको हो । कम्पनीले भदौ २९ गतेसम्म हकप्रद भर्न सकिने सुविधा दिएको छ । हाल सानिमा माईको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । १००% हकप्रद बिक्री गरिसकेपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुग्नेछ । गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा सानिमाले २६ करोड ५ लाख ८१ जार रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको थियो । यसको प्रतिसेयर आम्दानी २४ रुपैयाँ ६७ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १२५ रुपैयाँ ५३ पैसा छ ।
लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटलबाट दरखास्त फारम भर्न र बुझाउन सक्नेछन् । यसैगरी, सानिमा बैंकको उपत्यका भित्रका चुच्चेपाटी, कलंकी, कुमारीपाटी, न्यूरोड र सूर्यविनायक शाखा तथा उपत्यका बाहिर विराटनगर, वीरगन्ज, बिर्तामोड, दमक, धरान, लहान, नारायणगढ, नेपालगन्ज र पोखरा शाखाबाट पनि फारम भर्न र बुझाउन पाइनेछ । लगानीकर्ताले हकप्रद सेयरको दरखास्त फारम बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल र सानिमा माई हाइड्रपावरको वेबसाइटबाट डाउनलोड गरेर पनि भर्न सक्नेछन् ।